Naya Post Nepal | एमाले प्रवेश गरेकाे महिनादिन नपुग्दै नायिका मानन्धरले पार्टी छाेड्दै, यस्ताे छ लामाे कारण ?
एमाले प्रवेश गरेकाे महिनादिन नपुग्दै नायिका मानन्धरले पार्टी छाेड्दै, यस्ताे छ लामाे कारण ?
काठमाडौँ अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले गएको चैत ८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सदस्यता लिइन्। यसपछि उनी आधिकारिक रुपमा राजनीतिमा होमिइन्। एमालेभन्दा अगाडि उनी डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा स्थापना भएको तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीमा आवद्ध थिइन्।
२०७९ बैशाख ६, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 1284 Views